Azo antoka fa tsy misy olona milaza fa ny korset vavy dia iray amin'ireo zava-manan'aina indrindra ao amin'ny paositry ny tovovavy, satria miantso ny hanamafisana ny fahamendrehan'ilay sary ary manafina ny fahalemeny. Tsy azo lazaina fa efa nivoaka ny lamaody hatramin'izay - ny sokajy dia avy amin'ny sokajy izay miala amin'ny lamaody foana, satria, tahaka ny androany, ary tamin'ny andro fahiny, dia nanompo ny vehivavy ho toy ny singa iray amin'ny akanjo. Na dia izany aza, ankehitriny ny kofehy ny vehivavy dia tsy misalasala miafina amin'ny akanjo marevaka sy akanjo marevaka - dia manao azy ho toy ny tampony, izay mampitombo ny tenda ary manangana ny tratra.
Tantara avy amin'ny korset vavy
Ilaina aloha ny manomboka: nahoana no mila kofehy isika? Vehivavy tany Gresy tranainy no nanao izany mba hahazoana antoka fa tsy manana habe lehibe ny nono, satria mifanohitra amin'izany idealy izany ho an'ny vehivavy tsara tarehy izany. Tamin'izany fotoana izany dia tena nankasitraka ny habetsahan'izy ireo marina, ary ny nono lehibe dia manimba ny firindran'ny endriny.
Tamin'ny vanim-potoana Gothic, nanomboka ny loko ny loko: maivana izy ireo, misy tsangambato vita amin'ny hazo sy zozoro mafy, izay mety hitazona ny endrika ilaina.
Ao amin'ny Renaissance, ny vehivavy dia miezaka ny hanamafisana azy kokoa, ary satria manohitra ny endrika voajanahary voajanahary izany, dia nitarika ny famoahana ireo taova ireo.
Ny akaiky indrindra amin'ny corsets maoderina dia azo raisina ho an'ireo izay niseho tamin'ny vanim-potoanan'ny Rokoco: ny vehivavy dia nitady ny nanangana sy nanantitrantitra ny tratra, ary koa ny hanao ny tandroka efa. Ankehitriny dia mahatsapa ny fironana tahaka izany ihany isika, saingy tsy dia mihetsika loatra izany: raha ny Rokoco no mety hahatratra 33 santimetatra ny tendany, amin'izao fotoana izao dia tsy zava-dehibe izany. Noho ny lozam-pampitam-barotra - 33 santimetatra, izay nampidirin'i Catherine de 'Medici, dia niteraka voka-dratsin'ny fahasalamana ireo vehivavy, satria navotsotra ny vavony ny kofehy, nanindrona ny atiny ary nivezivezy ny fampidiran-dra.
Ankehitriny, ny korsets dia manantitrantitra ny firindran'ny volo eo amin'ny vehivavy: ny tavy tsy taka-bao sy ny tetezana tsy natiora dia efa taloha. Amin'izao fotoana izao, manitsy kely ny endrika ny korset noho ny fanorenana maitso.
Corsage sy corset - misy fahasamihafana ve?
Maro ny olona mety hanontany tena raha misy ny fahasamihafana misy eo amin'ny corset sy ny corsage: mitovy ny anaran'izy ireo, saingy tsy mitovy izy ireo, ary tsy izany ihany - tsy mitovy izy ireo, manao asa samihafa.
Noho izany, teboka vitsivitsy, inona no mampiavaka ny kofehy avy amin'ny corsage:
Ny corsage amin'ny vehivavy dia zavatra mamaritra zavatra, izay azo ampitahaina amin'ny jaky na ambony.
Ny corset dia tsy vitan'ny mofomamy, fa zavatra manitsy ihany koa.
Ny corsage, amin'ny ankapobeny, dia manana zipo, ary ny asa fihodirana dia toy ny singa miavaka fotsiny.
Ny koferina dia mitaingina ary taolana maro - hatramin'ny 24, izay manampy amin'ny fitazonana ny endrika maniry.
Ny kofehy dia tsy mitafy toy ny bodofotsy, fa koa toy ny kilalao.
Ny corsage dia zara raha ampiasaina amin'ny lobaka: ho an'ny tanjona milamina, mamorona sary iray.
Ny kofehy hariva dia voaravaka amin'ny embroidery, vato ary haingon-tsoroka voalohany. Indraindray, ireo kofehy ireo dia mifatotra eo anoloana amin'ny bokotra kely ary ny lamosina dia lany. Ny kofehy amin'ny asa atao amin'ny hariva dia mety amin'ny dantelina, singa amin'ny atlasa izay manome zavatra bebe kokoa ho an'ny vehivavy sy ny fahamboniana.
Ny lalaovina amin'ny lokony dia afaka manao zavatra toy ny fomba fanitsiana: ohatra, eo amin'ny kofehy matevina eo amin'ny faritra iray dia mametra ny lamba mainty. Noho izany, amin'ny fomba maso, ny tavy dia mibaribary kokoa.
Raha miresaka momba ny kofehy hariva, dia tsy azo atao ny mahatsiaro ny volombava mainty: ity kofehy ity dia maneho sexy sy mistery, indrindra raha ampitaina amin'ny fonon-tsela matevina sy matevina mainty.
Underwear and corsets
Ny korset amin'ny endriky ny lamba firakotra amin'izao fotoana izao dia matetika ampiasaina amin'ny endriky ny endriny, ary maro ireo modely dia voaravaka amin'ny tsipìka, loko ary vato rongony.
Laconic safidy natao hanitsiana ny endriky sy ny akanjo akanjo ary akanjo, manana firavaka kely indrindra. Ny voka-dratsin'ireny kofehy ireny dia ny tsy ahafahany miseho amin'ny endriny mifangaro, satria ny taolana dia ho hita.
Ny fisafidianana ny haben'ny corset dia tsy mitovy amin'ny fisafidianana ny haben'ny akanjo hafa na ny ambony. Mifidiana kofehy, izay kely noho ny mari-pamantarana tena izy, dia tsy mendrika izany, satria sarotra ny hitafy. Ankoatra izany, tsy tokony handray zavatra goavana ianao - amin'ity tranga ity, dia hiorina ny corset, raha toa ka mihamafy izany.
Ny kofehy maoderina dia natao araka ny fenitra ankapobeny:
Tokony hojerena manokana ny habetsaky ny tavy sy tratra: ny tokony ho izy dia ny sanda misy eo amin'ny santimetre.
Zavamaniry misy kofehy matevina
Ankizy japoney ho an'ny vehivavy bevohoka
Akanjo hoditra marika hoditra
Ny akanjon'akanjo - amin'ny inona ny manao loko marefo?
Sandale misy kiraro
Fandevenana mody - 45 fototry ny modely modely ho an'ny tsirony rehetra
Akanjo jiro misy kapa
Ny rivodoza vehivavy 2016
Fiterahana amin'ny herinandro 32 herinandro
Sakafo tsotra sy matsiro avy any turkey - fanatsarana
Vehivavy miloko matevina
Miala amin'ny vavony
Hairstyle ho an'ny volo fohy isan'andro
Inona no hampiarahana akanjo mena?
Ahoana no itomboan'ny kafe?
Feno amin'ny rantsantanana - fitsaboana
Ahoana ny fomba fanasana lamba amin'ny feta isan-karazany - fomba fisedrana
Kim Kardashian dia tsy mitsahatra amin'ny fiofanana taorian'ny fisehoan-tsary "marina" tao amin'ny haino aman-jery